တရုတ် Eco Friendly ရေခဲသေတ္တာ, Generator ကို, လေစွမ်းအင်တာဘိုင် Generator ကိုပေးသွင်းများအတွက်ရေခဲသေတ္တာသည် Perfluorinated အရည်
ဖေါ်ပြချက်:Eco Friendly ရေခဲသေတ္တာ,Generator ကိုများအတွက် Perfluorinated အရည်,လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ,အနိမ့်အဆိပ်အတောက်ဖလိုရို solvent,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ > လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Eco Friendly ရေခဲသေတ္တာ, Generator ကိုများအတွက် Perfluorinated အရည် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကို 47 ဒီဂရီ Dielectric Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
TUWF-47 လေစွမ်းအင်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက်က Non-အန္တရာယ်ရှိဓာတု  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက်အီလက်ထရောနစ်ဖြေရှင်းချက်ဓာတု  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက် 7PH Value ကို Dielectric Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက် Perfluorinated အရည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက် Fluorocarbon အေးအလတ်စား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက် transparent ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက် Eco-friendly Dielectric Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုအဘို့အနိမ့်အဆိပ်ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လေရဟတ်တာဘိုင်မီးစက်များအတွက်အရည် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကို 47 ဒီဂရီ Dielectric Coating အလတ်စားစီးရီးအေး Fluorocarbon, အရာမူထူးခြားတဲ့ Perfluorinated အရည်တ္ထုများဖြစ်ကြသည် မြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်, စံပြဓာတု inertia, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အပူစီးကူးခြင်းနှင့်ကောင်းသောများ...
TUWF-47 လေစွမ်းအင်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက်က Non-အန္တရာယ်ရှိဓာတု Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာလည်းအမည်ရှိဖြစ်ပါတယ်: Perfluorohexene Fluorocarbon အအေးခံခြင်းအလတ်စား မြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသည်။...
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက်အီလက်ထရောနစ်ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက်ဓာတု ဓာတုအမည်: Perfluorohexene စံပြဓာတုအာဂွန်, ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးသောအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်အပူလွန်ကျူးအခါသမယတွင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Fluorocarbon အေးအလတ်စားစီးရီး, အရာ...
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက် 7PH Value ကို Dielectric Coating Solutions စံပြဓာတုအာဂွန်အေး, ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးသောအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်အပူလွန်ကျူးအခါသမယတွင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ CPU ကို: နှစ်မြှုပ်ခြင်းအအေးစနစ်ကကဲ့သို့သော,...
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက် Perfluorinated အရည် ဖလိုရင်းအရည်ပျော်ပစ္စည်းအရည် Perfluorinated တ္ထုများတစ်ခုမျိုးဖြစ်ပါသည်, ကက Non-အန္တရာယ်ရှိကုန်စည်သို့မဟုတ် Non-ပေါက်ကွဲဖြစ်ပါသည်, လေစွမ်းအင်မျိုးဆက်များအတွက်အသုံးပြုသည် non-မီးလောင်လွယ် flash...
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက် Fluorocarbon အေးအလတ်စား အေးအလတ်စားကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးသောအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်အပူလွန်ကျူးအခါသမယတွင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဖလိုရိုက်ဓာတုအမည်, Perfluorohexene ဖြစ်ပါသည် မြင့်မားသော dielectric...
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက် Eco-friendly Dielectric Coating အလတ်စားအေး Fluorocarbon ကြောင့် 55KV ထက် သာ. ကြီးမြတ်ကောင်းသောလျှပ်စစ်လျှပ်ကာ, နှင့်မြင့်မားသောပြိုကွဲဗို့အားရှိပါတယ်။ ဒီစီးရီးမြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသည်သောထူးခြားတဲ့...
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုအဘို့အနိမ့်အဆိပ်ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက် ဤသည်အလွန်အလယ်အလတ်ကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက် (47 ℃) ဖြစ်ပါသည်, အလုပ်ကာလအတွင်းရေငွေ့ပျံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရှိသည်, အပူကိုပယ်ရှားဖို့ရေငွေ့ပျံ၏အပူကိုသုံးပြီး, ကျယ်ပြန့်သက်ဆိုင်မှုရှိသည်။...
လေရဟတ်တာဘိုင်မီးစက်များအတွက်အရည် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ အလတ်စားအေး Fluorocarbon Excellent ကလျှပ်စစ်လျှပ်ကာမြင့်မား dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်, စံပြဓာတု inertia ရှိပြီး အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အပူစီးကူးခြင်းနှင့်ကောင်းသောစနစ်ကလိုက်ဖက်မှု,...
တရုတ်နိုင်ငံ လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ ပေးသွင်း
သငျသညျလေတိုက်တာဘိုင်အေး၏ဒုက္ခရှိခြင်းပါသလား? ဖလိုရိုက်အရည်ပျော်ပစ္စည်းအများအပြားအပူလွှဲပြောင်းပလီကေးရှင်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေရှည်တည်တံ့ရေးအပေါ်အဘယ်သူမျှမအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်မသာ။ Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာကျယ်ပြန့်သော Operating အပူချိန်အကွာအဝေးလွယ်ကူပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်အတူ Non-မီးလောင်လွယ်ကာကှယျအရည်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကထိုကဲ့သို့ရေ, Ethylene glycol သို့မဟုတ်ရေနံကဲ့သို့သောရိုးရာအအေးအရည်များအတွက်အစားထိုးဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါဖလိုရိုက်လည်းလေတိုက်တာဘိုင်၏လွန်ကျူးအပူမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သငျသညျထကျအပူမှပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းရှာဖို့လိုအပျပါက, အကူအညီတောင်းကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။
Eco Friendly ရေခဲသေတ္တာ Generator ကိုများအတွက် Perfluorinated အရည် လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ အနိမ့်အဆိပ်အတောက်ဖလိုရို solvent fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ